Maxay Af-Urur muhiim u tahay? | SAHAN ONLINE
Af urur waa meel istaraatiji ah oo 30 KM u jirta laamiga Boosaaso gala
Xeeldheerayaashu waxay aaminsan yihiin in Puntland ay xeel milateri uga baxday Af urur
Dr Zakariye Yuusuf oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo gobolka wuxuu qabaa in taasi ay ku xiran tahay inta ay le’eg tahay cududda ciidan ee Puntland, iyo istaraatijiyada ay ka lleeyihiin Al Shabaab deegaanka Af-Urur.
“Waxaa laga yaabaa in Al Shabaab ay is leeyihiin ‘bal fiiriya in awoodooda ay qaybsami karto iyo in kale’ oo istaraatijiyad noocaas ah ay dheelayaan, laakin Puntland ayey ku xiran tahay awoodda ay u leedahay inay ku quusiso Al Shabaab” ayuu yiri.
Wuxuu intaa raaciyey “Puntland haddii ay shacabkeeda abaabusho way kari kartaa in ay dib ugu celiso Al Shabaab meeshii ay hore u joogeen”.
“Waxaa dhici karta in akhbaar laga helay oo meesha looga baxay, ma aha wax aan sheegi karno sababta dhabta ah” ayuu yiri Dr Zakariye.
“Haddii aragti midaysan iyo siyaasad horumar leh lagu wajaho amniga Puntland, waxaa hubaal ah inay iska difaaci karaan Al Shabaab” ayuu sii raaciyey.
Labada dhinac midkoodna iminka gacanta kuma hayo
Dhinaca dawladda dhexe ayuu tilmaamay inay waajib ku tahay inay Puntland kala qayb qaadato sidii ay isaga difaaci lahayd Al Shabaab, “laakinse waa inay Puntland la timaado istaraatijiyad lagu caawiyo”.